Waxyaabihii Ka Dhaafay Tareennada Xawaaraha-Xawaaraha Ka Baxsan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTareenada Xawaaraha Sare ee Tareenka waa la ilaaway
11 / 12 / 2016 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Alaabada la hilmaamay ee Tareennada Xawaaraha Sare ayaa la yaaban: In kasta oo uu Tareenka Xawaaraha Sare xajisto waxyaalaha la illaaway ee diiwaanka lagu hayo laguna keydiyo si badbaado leh qol gaar ah oo sugaya dalabka milkiilayaasha, dhaqannada aadka u fiican ayaa ka mahadceliya rakaabka.
Tan iyo maalintii ay shaqada gashay oo ay soo jiidatay dareenka muwaadiniinta helay dareenka aadka u badan ee alaabooyinka'TTTlerler waxay soo jiidataa feejignaan. Safar kasta ka dib intaadan gaarin meeshuu ku yaal ka hor inta aan lagu dhawaaqin arrintan, muwaadiniinta, wali wey iska iloobi karaan waxyaabaha ay leeyihiin YTT'lerin. Duulimaadyada kadib, shaqaaluhu waa la baarayaa oo la duubayaa haddii wax alaabo ah laga helo.
Xitaa qalfoofka waa la iloobi karaa
Muraayadaha muraayadaha indhaha, dalladaha iyo jaakadaha ayaa loo illaaway xilli loo yaqaan tareennada, mararka qaarkood qalabka aan la qiyaasi karin ayaa sidoo kale soo jiidanaya indhaha. Boorsooyinka, taleefannada gacanta, waraaqaha waraaqaha, kaararka Aqoonsiga, xitaa strollers, xitaa alaabooyinka la ilaaway ee loo yaqaan 'YHT'lerle', qolalka gaarka loo leeyahay ee xarunta ayaa lagu keydiyaa duubista. Qaar ka mid ah alaabada luntay ee lagu keydiyo qolalkaas muddo hal sano ah oo aan la gaari karin milkiilaha ayaa la baabi'inayaa, iyadoo badeecada aan laga qaadin gurigan la qiimeeyo loona wareejiyo dadweynaha.
Muwaadiniintu way ku qanacsan yihiin adeeggan
Hawlaha ay wataan hay'adda 'NWT' oo ay la socdaan qaar ka mid ah muwaadiniinta Eskisehir, ayaa ah in adeeggan la tilmaamo, oo muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin. Muwaadiniinta hantidooda ku waayey xafiisyada badeecadaha ee lumay waa inay aadaan muwaadiniinta wax iibsada, rakaabku waa inay aad uga taxaddaraan, ayuu yidhi.
Xasuuso alaabta la ilaaway ee trams ee Samsun
Buundada tareenka ee Wuppertal, Jarmalka, ayaa ka yaabisay qof walba!
Tilmaamaya tareenka tamarta dabaysha
Gawaadhida 200 ayaa la yaabay jihooyinka tareenka (Video)
Astaamaha 50 mitir ahaan
Alaabta la iloobay ee nidaamka baska iyo tareenada caasimadda
Waxyaabaha aan la shaacin ee tareenka Samsam waxaa la geeyaa milkiilayaasha
Maanta taariikhda: 12 December 1901 Ziraat Bank Hicaz Railways Taariikhda